G talk ချည်း သုံးနေမယ့်အစား ဘလော့ဂ်တင်ပါလား [Article]
Myanmar IT Resource Forum » ARTICLES ZONE » » Article Page » G talk ချည်း သုံးနေမယ့်အစား ဘလော့ဂ်တင်ပါလား [Article]
ကျနေ်ာရဲ့ ညအလင်္ကာဘလော့လေးမှာ အခုတစ်လော တက်ဂ်ပိုစ့်လေးများ နဲ့ ဝေဆာနေပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် ဘလော့ကာ အစ်ကိုZOX
ရဲ့ တက်ဂ်ကိုရေး ပါဦးမယ်။
ကျွန်တော် အင်တာနက်ကို သုံးခဲ့တာ ဒီနှစ်မပါ အ၀င် ၈နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်တုန်းက ဆို...ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ မြို့လေးမှာ အင်တာနက် ၊ အီးမေလ်း ဆိုတာ ကို လက်ချိုးရေ လိုရအောင် သုံးသူနည်းပါးပါတယ်။ Dial_up စနစ်...ဖုန်းလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်သုံးခဲ့ရတာပါ။ အလုပ်ခွင်မှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် လေ့လာခဲ့ရင်း... နည်းစနစ် တွေလည်း တိုးတက်လာကာ အခုဆို ADSL လိုင်းနဲ့ သုံးလို့ရတဲ့အထိ တိုးတက်လာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတွေ တိုးပွားဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုသာလာပါတယ်။
အခုဆို..နယ်.မြို့နယ် အသီးသီး အတွင်းမှာလည်း အင်တာနက် ကဖေးတွေ များပြားလာပြီး အင်တာနက် မသုံးတတ်သူ လူငယ်ဆိုတာ ရှားလာပါပြီ။ အခုလူငယ်များ အင်တာနက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းတာ ဘယ်လောက် မြန်ဆန်သလဲဆိုရင် ချက်တင်ဆိုတာ တော်တော် ခေတ်စားနေပါပြီ။ချက်တင်လုပ်တာ မကောင်းဘူးလား လို့မေးရင်...ကောင်းအောင် အသုံးချ တတ်ရင် ကောင်းပါတယ်။ အင်တာနက်ဆိုတာကို ချက်တင်ကနေ စတင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်လည်း သင့်လျှော်ရာ ပညာရပ်များ၊ နည်းပညာများ မိမိသက်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတကို ရှာမှီးရင်း အင်တာနက် အတွေ့အကြုံကိုမြှင်တင်ယူဖို့လိုပါတယ်။ ဂျီတော့နဲ့ တခြား ချက်တင် ပရိုဂမ် တွေကလည်း မရိုးနိုင်အောင် ရှိနေတော့ ကိုယ့်အတွက် အသိပညာ၊ ဗဟုသုတတွေ မရပဲ ချက်တင်နဲ့ အချိန်ကုန်နေမဲ့အစား...ဘလော့တစ်ခု ဖန်းတီးရင်း ကိုယ့်အသိပညာတွေကို ဖြန့်ဝေပါ၊အများ သူငှာ ဝေငှသော အသိပညာတွေ လည်းရှာဖွေရင်း ဘလော့လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေး အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရရင်...ဘလော့လေးကို စတင်ခဲ့တာ(1)နှစ်ပြည်ပြီးကာစပဲ ရှိသေးတယ်။
အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့သူမိုလို့ အလုပ်လဲ မလစ်ဟင်းရအောင် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ဘလော့လေး လဲမလစ် ဟင်းရအောင်နဲ့ မနက် ၁၀နာရီမှ ညနေ ၆နာရီအတွင်း ရောက်ယှက် ကိုခပ်နေအောင် လုပ်ရတာ။
ဒီကြားထဲ နက်မကောင်းရင် စိတ်ညစ်ရတယ်ပေါ့။
freedom နဲ့ကျော် ဟို proxy နဲ့ကျော် ဟိုကျော်ဒီကျော်ပေါ့...။ဒါပေမဲ့ စိတ်မပျက်ပါဘူး....
ပထမဆုံး လိပ်စာလေးကတော့ [You must be registered and logged in to see this link.]
၂၀၀9ခုနှစ် သြဂတ်လ မှာ တော့
ပထမတော့ Wordpress လေးနဲ့လည်း ရင်းနှီးအောင် တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။
အခုတော့ blogspot တွေ လေ့လာရင်းနဲ့ ပိုစ်တွေတင်ဖြစ်နေပါတယ်းး
ကျွန်တော့် ကို Blogspot နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိက ပြောပြပေးတာက
မှ ညီလေးလဲဖြစ်တဲ့ ကိုလင်းနေ က ပြောပြသင်ပေးခဲ့ပါတယ်
အခုလို တစ်နှစ်ခွဲတာ ကာလအတွင်းမှာ ဘလော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ တော်တော်လေး ရခဲ့တယ်။မနက်ဆို ကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်တာနဲ့ ဘယ်သူတွေများ ဘာပြော သွားခဲ့ကြ မလဲ။ ပိုစ်လေးကရော… စီဘောက်လေးထဲမှာရော… နဲ့အိမ်လည်သွားလို့…..ဖိတ်ခေါ်လို့ လာလည်ကြတာလား၊ ကိုယ်မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အမြဲလာအားပေးတာ ရော ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ရေတွက်ရတာ အမောပါ။ ကိုးလို့ကန့်လန့်ပြောသူတွေ နဲ့လည်းကြုံခဲ့ရဘူးတယ်။
ဘလော့ မောင်နှမများရဲ့ ချစ်ခင်စွာ အားပေး လက်တွဲခေါ်ယူမှုကြောင့် ဒီလောက် ခရီးရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ ဘလော့လေးက ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဓိက ကတော့ စာဖတ်ဖြစ်ခြင်းပါ။ ပိုစ့်တစ်ခုတင်တော့မယ် ဆိုရင် အကြောင်းအရာ ရှာရပါတော့တယ်။ ဒီအကြောင်းအရာရဖို့စာဖတ်ရပါတယ်။ နောက်...ကိုယ်သိတဲ့ဖတ်ထားတဲ့ ရှာဖွေထားတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို သူများကိုဖြန့်ဝေနေသလို၊ သူများဖြန့်ဝေတဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကို လည်းဖတ်ဖြစ် ပါတယ်။
ကျွန်တောိ့် ရင်ထဲရှိတဲ့ခံစားချက်များ၊ ဗဟုသုတများ၊ မှတ်စုလေးများ၊ ဘာသာရေးအသိလေးများကို ရိုးသားစွာ ဖော်ထုတ်ပြသခွင့် ရတဲ့အတွက် ကြည်နှုးမိပါတယ်။ ကိုယ်အတွက်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ဘာတွေများ စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ကြဦးမလဲ…စဉ်းစားရင်း...ဖတ်မိတဲ့ လူတိုင်း အတွက် ရသမြောက်စွာ ခံစားနိုင်စေဖို့ မျှဝေခံစားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချက်တင်မှာပဲ အချိန်တွေ ကုန်မနေပဲ ဘလော့ လေးတစ်ခုလောက် စတင်လုပ်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘလော့အတွက် အကူအညီလိုလျှင် လည်း အချိန် မရွေးကူညီဖို့ အသင့်ပါ။ အင်တာနက် သုံးခြင်း၊ ဘလော့ရေးခြင်းဖြင့် .........
Last edited by ထက်နိုင် on 27th April 2010, 8:15 am; edited2times in total (Reason for editing : Link များကို Code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်)
Re: G talk ချည်း သုံးနေမယ့်အစား ဘလော့ဂ်တင်ပါလား [Article]
on 2nd January 2010, 11:02 am by knight^of^saint^john
ကောင်းပါတယ် အစ်ကို။ကျွန်တော်လဲ ဘလော့တစ်ခုမရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ရေးထားပါတယ်။
၀င်ကြည့်ပြီးလိုတာတွေလမ်းညွှန်ပေးပါဦး။ [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by kohtet on 3rd January 2010, 10:58 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Link အား Code ဖြင့်ဖော်ပြလိုက်သည်.)
on 2nd January 2010, 11:10 am by alt.332
ကို ET ပြောတာဟုတ်တယ်...ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က တော့ အတတ်ဆန်းမလို့... Host ကောင်း၂ လေးဝယ်ပြီး...ကိုယ်တိုင် blog ရေးရင်ကောင်းမလားလို့ ဘယ်ကဟာကိုမှယူမသုံးပဲနဲ့ page တွေရဲ့ code ကိုမှီငြမ်းပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင် page လေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ အခုလော၂ ဆယ်တော့ html လေးစသင်ကာစပဲရှိသေးတယ်...အားတော့အတော်ငယ်သား...
on 3rd January 2010, 1:54 pm by N@Y Y!N3
ကို ET က tutorial လေး လုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် .. လိုက်လုပ်လို့ရတာပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.] မတွေ့ တာတော့ ကြာပြီနော်
ဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့်ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]